‘यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं’ « Sansar News
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:११
अहिले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बद्ध ट्रेड यूनियनहरु सामाजिक सूरक्षाकोष आबद्ध हुने विषयमा आन्दोलित छन् । सरकार जसरी पनि सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारीमा देखिन्छ भने ट्रेड यूनियनहरु अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नसकिने भन्दै विरोध जनाईरहेका छन् । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बद्ध टे«ड युनियनले किन विरोध जनाईरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रित भएर नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सबिन भट्टराईसँग संसार न्यूजका तर्फबाट राजेन्द्र बरालले केहि जिज्ञासा राखेका छन् । भट्टराईसँग गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंश :
बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको आन्दोलन केका लागि ?
हामी आफ्नो आवाज अर्काले उठाइदिन्छ भन्दै नेताहरुका अगाडी कुदिरहेका थियौं, यो कुरा गलत रहेछ । अब हामी हाम्रो आवाज आफैं उठाउन अगाडी आएका छौं । अहिले हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु थिचोमिचोमा परेका छौं र हामी हाम्रो आवाज आफैं उठाउन अगाडी आएका हौं ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यहाँहरुलाई के समस्या पर्छ र ?
समानताको एउटा सिद्धान्त छ । त्यो सिद्धान्तअनुसार सबैले समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा त ठिक छ । तर, एउटा अग्लो छ त्यसको खुट्टा काटेर होचोलाई अग्लो बनाउने भन्ने कुराले समानता हुँदैन । त्यो तरिकाले अग्लोलाई त न्याय हुँदै हुँदैन । न त्यो तरिकाले होचोलाई न्याय हुन्छ ।
अहिले सरकारले त्यस्तै गर्न खोजेको हो । हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको खुट्टा काटेर अरुलाई जोड्न खोजेको हो । यसले न हामीलाई न्याय हुन्छ, न अन्य क्षेत्रकालाई ।
जुन वर्गका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म सेवा सुबिधाबाट बञ्चित छन्, सेवा सुबिधा वहाँहरुलाई दिए भैगो । हामीले त हाम्रो संस्थाबाट सेवा सुबिधा पाइरहेकै छौ । हामीलाई किन चाहियो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।
अर्को कुरा, हामी राज्यलाई कर तिर्छौं । हामीले तिरेको करले कसैको उद्धार भैरहेको छ भने हामीलाई कर तिर्न गाह्रो ? कर भनेको बाध्यता हो योगदान भनेको ऐच्छिक हुनुपर्छ । हामीले बढी कमाएका छौं भने बढी कर पनि तिरेका छौं नी हैन र ? त्यो कुरालाई पनि वहाँहरुले नजरअन्दाज गरिदिनु भएको छ । जसले सेवासुबिधा पाएको छैन् उसले सेवा सुविधा पाओस् । हामी त हाम्रो काम र सेवा सुबिधामा आनन्द लिईरहेका छौं हामीलाई नजिस्काइयोस् । तिमिहरुलाई अहिले होईन् तल्लो लेबलका कर्मचारीहरुलाई अपग्रेट गरेपछि अनि एउटै बास्केटमा हालेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागि गराउँछौं भन्नु पर्नेमा हामीलाई जिस्काउने काम गरियो ।
हामी त हाम्रो काम र सेवा सुविधामा आनन्द लिईरहेका छौं, हामीलाई नजिस्काइयोस् । तिमिहरुलाई अहिले होईन् तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई अपग्रेड गरेपछि अनि एउटै बास्केटमा हालेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा सहभागि गराउँछौं भन्नु पर्नेमा हामीलाई जिस्काउने काम गरियो ।
सामाजिक सुरक्षाकोष तथा संचयकोष दुबैतर्फ सहभागि हुँदा यहाँहरुलाई आर्थिक भार बढि पर्ने भएर हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा त थोरै योगदान कर्मचारीहरुको र अलिक धेरै योगदान व्यवस्थापनको हुनै हैन र ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्ने साथीहरुलाई बाहिर बोल्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय साथीहरुको आवाज अरुहरुले बोलिदिएको जस्तो पनि देखियो । तर, त्यस्तो होईन अहिलेको हाम्रो माग विशुद्ध ट्रेड यूनियनसँग सम्बन्धीत हो । हामी नबोल्नेहरु हाम्रो आवाजको लागि बोल्ने भएका छौ भने ट्रेड यूनियनमा आबद्ध भएपछि त्यहाँ पनि हामीले केहि न केहि अधिकार त दिएकै हुन्छौं ।
वर्तमान ट्रेड यूनिनमा नै यसभन्दा अगाडीको ट्रेड यूनियनमा टेकेर जोड्दै जोड्दै जान्छौं । नचाहिने कुरा हटाउँछौं चाहिने कुरा राख्छौं ।
अर्को कुरा, जति पनि पूराना संस्थाहरु छन् तिनीहरु सबैले निश्चित प्रतिशत रकम निभृतिभरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कसैले निश्चित समय काम गरेपछि एक महिनाको, कसैले डेढ महिनाको, कसैले दुई महिनाको तथा कसैले तीन महिनाको रकम व्यवस्थापन पक्षसँग ट्रेडयुनियनले कलेभ्टिभ बार्गेनिङ गरेर सुबिधा दिन लगाएका हुन्छन् ।
मैले जतिबर्ष काम गरे त्यति बराबरको रकम मेरो कोषमा जम्मा भएको छ । अहिले वहाँहरुले एक महिनाको कुरा गर्नु भएको छ तर, हाम्रो त पहिलादेखि नै तीन महिनाको रकम जम्मा भैरहेकै छ । अनि कसरी हामीलाई न्याय हुन्छ त ? हामीलाई त सिधै घाटा भैरहेको छ नी त ।
अर्को कुरा वहाँहरु हामी पुराना कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयभित्र यो योजनामा सहभागि हुँदा बम्पर उपहार दिने भन्नुहुन्छ । ऐनमा त बम्पर उपहार भन्ने त छैन त । ऐनमा नै नभएको कुरा वहाँहरुले मुखले भन्दा मात्रै हुन्छ र ? यो चिठ्ठा खोलेको त हैननी । ऐनले कसैलाई काख कसैलाई पाखा पक्कै पनि गर्नुहुँदैन ।
अर्को कुरा, वहाँहरुले हामीलाई निभृत्तिभरण कोष र पेन्सन कोष दुवै तिर राख्न पाईने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । वहाँहरुले यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । वहाँहरुले यसरी स्किम बेच्ने हैन नी । मैले यहाँ बस्दा कम्तीमा ३ महिनाको त पाउँछु नी तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा मात्र एक महिनाको त्यो पनि पाउने नपाउने कुनै ग्यारेन्टि छैन ।
तपाईंहरुलाई बैंक तथा वित्तियसंस्थाको व्यवस्थापनको उक्साहटमा यस्तो गतिबिधि गरिरहेको भन्ने आरोप छ । के त्यस्तै हो त ?
जो जुनसंस्थामा काम गर्छ उसले त्यो संस्थाको गुणगान गाउँछ, गाउनैपर्छ । वहाँहरु पनि त्यो (स.स.कोष) संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, त्यसको गुणगान गाउनुहुन्छ । वहाँहरुलाई पनि निजामतीबाट छुटाएर त्यो कोषमा ल्याएर राखिएको छ । वहाँहरुलाई पनि टार्गेट दिएको होला । त्यो कुरा हामी बुझ्छौं ।
म मेरो संस्थालाई सबैभन्दा राम्रो संस्था भन्छु । पालनपोषण गर्नेदेखि सबै परिवार हेर्ने जिम्मा मेरो संस्थाले लिएको छ भने मेरोलागि सबैभन्दा सर्बोपरि भनेको मेरो संस्था हो । म मेरो संस्थाको बिरुद्धमा जान सक्दिन नै । यो कुरा त वहाँहरुलाई पनि लागूहुन्छ र हामीलाई पनि ।
अर्को कुरा, मैले अगाडी पनि भनिसकें जसले बढि आम्दानी गर्दछ उसले बढि कर पनि तिर्दछ । यो कुरा त सबैलाई लागु हुन्छ । यो कुरा व्यवस्थापनलाई पनि त लागू हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो संस्थाहरुले दिने सेवा सुबिधा त हामी कर्मचारीलाई मात्र हैन नी त्यो त व्यवस्थापनलाई पनि लागू हुन्छ । त्यो फण्ड त वहाँहरुको पनि कहिँ न कहिँबाट जम्मा भएको छ ।
२०७४ सालमा बनेको नेपालको वर्तमान श्रम ऐनअनुसार हाम्रो सेवा सुविधा वापतको जति पनि रकम छ त्यसलाई नागरिक लगानीकोष र सञ्चय कोषमा लगाईयो । अहिले त्यसलाई सबै सामाजिक सुरक्षाकोषमा लगेर जम्मा गर भनिएको छ । तर, रिटायर्ड हुन केहि वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा पनि त्यो पैसा सबै उता लगेर राख भनियो । ऐनले पनि त्यहि भन्यो । तर, वहाँहरुको कार्यविधिले तपाईँहरुको पुरानो पैसा चाहिँदैन नयाँ पैसा दिनुहोस् भन्नु हुन्छ । अनि ऐन ठूलो कि कार्यविधि ठूलो ? हामीलाई डर त्यहि नेर हो ।
ऐनले जहिलै पनि कार्यबिधिलाई काट्छ । तपाईहरुले जे–जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा ऐनमा राखेर लेखेर आईदिनुहोस भन्ने कुरा मात्र हाम्रो हो । हामीले वहाँहरुको विरोध गरेको हैन । तर, वहाँहरु भित्र भएका ‘लुपहोल’का कारण हामीलाई चित्त नबुझेको हो । यीनलाई मिलाई दिनुहोस् हामी मजाले यो कार्यक्रममा आउँछौ । यो त सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो नी । यसको हामीले त्यै विरोध गरेको होईन ।
यो तपाईंहरुको मात्रै सरोकारको विषय भएन । यो त बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका सबै कर्मचारीको सरोकारको विषय भयो । अब यो विषयमा सरकारसँग सहमती हुने सम्भावना कति छ ?
यो विषयमा हामी वहाँहरुसँग सम्पर्कमा छौं । कुरा पनि गरिरहेका छौं । कहिले भर्चुअल त कहिले फोनको माध्यमबाट कुरा गरिरहेका छौं । वहाँहरुमा अलिक पेलेर जाने हो की भन्ने देखियो । म वहाँहरुलाई के आग्रह गर्न चाहान्छु भने हामी मुडभेड तिर नजाऔं । हामीलाई जिस्काउने काम नगरियोस् । हामी पेशागत संगठनमा काम गर्ने साथीहरु बोल्दैनौ ।
एउटा कहावत छ नी ‘सोझोलाई रिस उठ्यो भने लाटो रिस उठ्छ’ हामीलाई त्यस्तो नगरियोस् । हामीले यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको पटक्कै होईन । हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा मिलाई दिनुहोस् । हामी आउँछौं ।
वहाँहरु हाम्रो मुद्दाको सम्बोधन नै नगरि तँ कसरी आउँदैनस्, तलाई कानून लगाएर पनि ल्याउँछौ भन्नु हुन्छ । समस्या त्यहिँनेर छ । कानून त वहाँहरुलाई पनि लाग्ला नी हजुर । म अन्यायमा परेँ भने त खोज्न जाने त कानून नै होला नी । हाम्रो आग्रह भनेको मुडभेडमा नजाऔं भन्ने नै हो ।
जसरी वहाँहरुले कानूनको ध्वाँस दिएर हामीलाई थर्काउँदै हुनुहुन्छ त्यो तरिका ठिक छैन । मुडभेडमा नजाऔं बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा समस्या आयो भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सन्देश राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यहि भएर हामी अहिलेसम्म केहि बोलेका थिएनौं ।
हामी बोल्या मात्र हौं, गर्या केहि पनि छैनौं । वहाँहरु भन्नु हुन्छ खाईपाई आएको सुविधा घट्दैन । तर अब त हामीले पाउने सुविधा त घट्ने भयो नी । नेपालको संविधान र ट्रेड यूनियन कानूनअनुसार २/२ वर्षमा हामीले बार्गेनिङ गरेर सेवा सुविधा थप्ने गरेका थियौं । यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्दा हामीले त्यसको रक्षा कसरी गर्न सक्छौं ? हामीले हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनौ भने त्यसको के अर्थ हुन्छ त ? अब म के मुख लिएर बार्गेनिङमा जाने ।
तपाईहरुले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आबद्ध ट्रेड यूनीयनहरुसँग पनि सहकार्य गर्नु भएको छ ?
मैले अघि पनि भने हामी नेतामुखी भयौं । त्यहि भएर हामी साह्रै मारमा पर्यौं । कम्तीमा नेता जनतामुखि भएको भए मारमा परिँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । हामीले ट्रेड यूनियनहरुसँग सहकार्य गर्ने हो । त्यो पनि मुद्दाका आधारमा हुन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको विभिन्न कुराहरु चित्त नबुझ्ला तर, ट्रेड यूनियनको मुद्दा मिल्दा मजाले सहकार्य हुन्छ ।
हामीले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्ने हैन पेशागत संगठनहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छौं । मेरो संस्थाले पार्टीको सदस्यता लिन पाउँदैनस भनेपछि म त्यहाँ त जानु भएन । तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने कुरा मेरो नैसर्गिक अधिकार हो मलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
श्रम ऐनअनुसार हाम्रो सेवा सुविधा वापतको जति पनि रकम छ त्यसलाई नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा राखियो । अहिले त्यसलाई सबै सामाजिक सुरक्षाकोषमा लगेर जम्मा गर भनिएको छ । तर, रिटायर्ड हुन केहि वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा पनि त्यो पैसा सबै उता लगेर राख भनियो । ऐनले पनि त्यहि भन्यो । तर, वहाँहरुको कार्यविधिले तपाईँहरुको पुरानो पैसा चाहिँदैन नयाँ पैसा दिनुहोस् भन्नु हुन्छ । अनि ऐन ठूलो कि कार्यविधि ठूलो ? हामीलाई डर त्यहि नेर हो ।
अन्त्यमा, अब समाधान कसरी खोज्ने त ?
राज्यले दमन गर्योे, हामी राज्यबाट शोषित भयौं भनेर हामीले सिनेमा तिर देख्न पाईन्थ्यो । त्यसैगरि एउटै देशको नागरिकलाई एउटालाई काखा र एउटालाई पाखा नगरियोस् । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामीलाई पनि बाहिर जान बाध्य नबनाईयोस् । आन्दोलनमा जान र झण्डा उठाउन बाध्य नबनाईयोस् । तोडफोडमा उत्रन बाध्य नबनाईयोस् भन्ने हाम्रो एउटा आग्रह मात्र हो ।
सहमती र सहकार्य गरौँ । अन्तिममा मिल्ने भनेको टेबुल मै हो । वार्ताद्वारा नै हो । दुईपक्ष बसौं र समस्याको समाधान गरौं । पछि भन्नै पर्दैन । क्याभिनेटबाट रातारात अध्यादेशहरु जारी हुन्छन भने ऐन संशाधनको हाम्रो माग किन पुरा हुँदैन ? तपाईहरु पनि हाम्रा लागि बोल्दिनुहोस भन्ने वहाँहरुलाई हाम्रो आग्रह हो ।